Narovan'ny Polisy goavambe goavambe: traikefa eropeana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bosnia sy Herzegovina » Narovan'ny Polisy goavambe goavambe: traikefa eropeana
Peter Tarlow dia manam-pahaizana momba ny fiarovana sy fizahan-tany ary nandefa ity tatitra ity avy any Eropa.
Omaly aho nandao an'i Kroasia ary niditra tao Bosnia-Herzegovina. Tao anatin'ny kilometatra iray dia nitety kilometatra ara-kolotsaina an-jatony aho. Eoropa Andrefana i Kroasia, Bosnia, na dia tontolo hafa aza ny manaraka. Ny iray amin'ireo tanjonay tany dia ny Tetezana "ratsy laza" ao Mostar, ilay toerana niadian'ny Kroaty sy Silamo.
Ny toerana dia fampahatsiahivana lehibe momba ny fahazoan'ny tandrefana kely fa ny teny hoe "firenena-pirenena" dia tsy misy ifandraisany amin'ity faritra ity amin'ny firenena izay misy firenena sy "fanjakana" (états) mitohy ho foto-kevitra roa tena miavaka. Raha ny tena izy dia azo atao ny mahatakatra ny antony mahatonga ireo fiteny toa ny anglisy, frantsay, na espaniola manelingelina ny fahazavan-tsaina; ny taxonomies-n'izy ireo dia tsy taratry ny ankamaroan'ny zava-misy eto an-tany.
Raha te hanana fahatakarana mazava kokoa sy tsara kokoa momba ny zava-misy ara-politika eto amin'ity faritra ity ianao dia avereno vakiana ny Bokin'i Estera Ny boky ara-Baiboly dia manampy ny tandrefana maoderina mba hahatakatra tsy ny lexicon politika marina ihany fa ny fahamarinan'ity fanambarana ity koa eto amin'ity faritra ity fa "izay tsy manadino tantara dia matetika no voaheloka hamelona azy io!"
Tetezana Mostar: tetezana mankany amin'ny ady
Bosnia dia "fanjakana" artifisialy misy firenena maro, samy miady mafy hitazona ny mombamomba azy ary tsy misy dikany tanteraka ilay hoe "fivavahana" amin'ny heviny tandrefana. Indray mandeha ihany, ny fiteny tandrefana dia misafotofoto fa tsy manazava ny voambolana mamorona fihenan'ny hevi-diso sy ny politika politika izay miteraka loza sy fahafatesana.
Ohatra, ny anjara asan'i Britain sy France tamin'ny ady Balkan tany 1990 dia ohatra amin'ny tsy fahalalana ara-politika na fivadihana politika mifangaro amin'ny fatra mavesatry ny politika Machiavellian. Ny fitsarana ara-politika dia mety an'ny mpahay tantara isam-batan'olona fa ny vokany dia nampalahelo ho an'ireo izay monina eto ary miaina miaraka amin'ireo politika diso lalana ireo isan'andro.
Mampihomehy, arakaraka ny hamakiany ny fampahalalam-baovao tandrefana sy ireo lazaina ho manam-pahaizana momba azy no tsy takatry ny olona. Ny valiny dia ny fandisoan-kevitra ara-politika matetika izay miteraka voka-dratsy.
Niditra tao Bosnia izaho sy ny namako mpitandro ny filaminana tamin'ny andro mangatsiaka, zavona ary orana. Ny toetr'andro dia nameno ny tantaran'ilay toerana ary namorona tahotra miafina izay rahona toa namorona fazera fahamarinana sosona. Tahaka ny tantaran'ny arabe na ny tranobe iray aza matetika no tafasaraka na tafasaraka amin'ny an'ny mpifanila vodirindrina aminy dia toy izany koa ny zavona sy fotoana amin'ny masoandro dia toa naneho ny tsy fahaizan'ny kolontsaina nandeha ra namaky ny lafiny politika.
Eto ny kolontsaina Ottoman tamin'ny taonjato faha-19 dia mikasika ny kolontsaina katolika amin'ny fomba izay tsy dia takatry ny tandrefana.
Amin'ity faritra eto amin'izao tontolo izao ity dia mahita trano fisakafoanana ianao izay milalao horonantsary ady sahabo ho telopolo taona izay toa naneho taratra omaly ary nampifangaro ireo sary ireo tamin'ny mozika pop tandrefana. Ny hafatra dia tsy takatry ny sain'ilay tandrefana “be fahalalana” salantsalany.
Taorian'ny andro iray nahaliana ny ara-politika sy ara-tantara dia niverina tany Kroasia aho, tany iray izay nikitihan'ny faritra atsinanan'ny fanjakana Australiana-hongroà taloha sy Andrefana ny popurris an'ny zom-pirenena sy ny vahoaka izay namorona ny Fanjakana Ottoman. Niverina tany Western European Split, toerana iray izay toy ny ao an-trano, tsy hoe nisakafo hariva fotsiny aho fa nihaona tamin'ny valiziko ihany koa. Tapitra ny andro lavorary nidirana tao amin'ny fisainana sarotra an'izao tontolo izao izay tsy nitovy tamin'ny ahy.
Narovan'ny polisy Kroaty goavambe
Misokatra ho an'ny orinasa Bleu Emeraude ao Saint Martin
Paypal dia mpikambana ao amin'ny PATA ankehitriny